इडिन्सन काभानीलाई तीन खेलको प्रतिबन्ध, एक लाख पाउन्ड जरिवाना – Nepal Press
इडिन्सन काभानीलाई तीन खेलको प्रतिबन्ध, एक लाख पाउन्ड जरिवाना
२०७७ पुष १७ गते ७:०६
एजेन्सी । म्यानचेस्टर युनाइटेडका उरुग्वेली स्ट्राइकर इडिन्सन काभानी तीन खेलको प्रतिबन्धमा परेका छन् । सामाजिक सन्जालमा रंगभेदी शब्दको प्रयोग गरेको आरोपमा छानबिनपछि एक लाख पाउन्ड जरिवानासहितको कारबाही सुनाइएको हो ।
३३ वर्षीय यी स्ट्राइकरले इंग्लिस फुटबल एशोसिएसनसँग आफ्नो गल्ती स्वीकार गरिसकेका छन् । काभानीले २९ नोभेम्बरमा साउथह्याम्प्टनमाथिको जितका लागि गोल गरेपछि इन्स्टाग्रामममा केही टिप्पणी गरेका थिए, जुन स्पेनिस भाषामा थियो ।
उनको पोष्टको अनेक अर्थ लाग्न थालेपछि तत्कालै डिलेट गरी माफी पनि मागेका थिए । जरिवाना र प्रतिबन्धसँगै उनले ‘फेस–टू–फेस’ शैक्षिक कार्यक्रममा पनि सहभागी हुनुपर्नेछ ।
काभानीको प्रतिबन्ध तत्कालै लागू हुनेछ र प्रिमियर लिगमा नयाँ वर्षको दिनमा एस्टोन भिल्लासँग हुने खेल उनले गुमाउनेछन् । उनले ६ जनवरीमा हुने लिग कप सेमिफाइनलमा म्यानचेस्टर सिटी र ९ जनवरीमा एफए कपको तेस्रो चरणमा वाटफोर्डसँगको खेल गुमाउनेछन् ।
प्रकाशित: २०७७ पुष १७ गते ७:०६
एसियाली टेबलटेनिस च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुन टेबलटेनिस टोली दोहा जाँदै
पलेशालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघको सम्मान
व्यक्तिगत कारण देखाउँदै ज्ञानेन्द्र मल्लले ईपीएल नखेल्ने!
शाहिद अफ्रिदीले ईपीएलका दुई खेल मात्रै खेल्ने!
ईपीएल खेल्न शाहिद अफ्रिदी नेपालमा (तस्बिरहरु)
रियल मड्रिडको फराकिलो जितमा एसेन्सियोको ह्याट्रिक
क्रिकेटर विनोद भण्डारीको खेल पत्रकार सोनिकासँग इन्गेजमेन्ट दशैंमा बिहे (तस्बिरहरु)
२० महिनापछि मैदानमा फर्किँदै फिल जोन्स
एनभीए क्लब च्याम्पियनसिपको खेलपाटीले प्रत्यक्ष प्रशारण गर्ने